बिनुले मलाई फोन नगरेर आफ्नो भिनाजुलाई किन गरी ?-Nagarikaawaj.com
श्रावण दोसो हप्ताको सोमबार, बिहानैदेखि झरीले बुटवलको वातावरणलाई एकाएक शीतल बनाएको थियो ।
श्रावण महिनालाई शिवको महिना पनि भनिन्छ । अनि, आज सोमबार पनि परेको ।
सिमसिमे पानी परेकै थियो, शिलुले छाता ओढिन् र बिहानै छोरीलाई लिएर मुक्तिनाथ धाम नयाँगाउ गइन् ।
उनले शुरुमा धामकै एकसय आठ धारामा मन प्रफुल्ल गराएर स्नान गरिन् । त्यसपछि शिवलिङ्गमा जलार्पण गरिन् र फूलप्रसाद लिएर घर फर्किन् ।
उनका श्रीमान विनोद, अधिल्लो दिन ससुराली सुनवल गएका, अझ आएका थिएनन् । उनी घरको बरण्डामा टुस्स बसेर थकाइ मार्दै गर्दा छोरी खुरुर्र दगुरेर गेट बाहिर खेल्न निस्की ।
धेरै दिनको प्रचण्ड गर्मी पछि झरी लागेकोहु“दा उनले ठूलो राहतको महसुस गरी, एकैछिन टोलाइछन् र भित्र कोठामा गएर पलङ्गमा पल्टिन् ।
शिलुकी चञ्चले छोरी, उप“m्रंदै घरमा आइ । शिलु, सुन्दर तरिकाले सजाएको आङ्खनो कोठाको सुन्दर पलङ्गमा खेल्दा खेल्दै भरखर मस्त निद्रामा सुतेकी थिइन् । जागिन् । तीनवर्षकी आङ्खनी छोरीलाई मायालु नजरले हेर्दै टोला“ंदै बसेकी शिलुको आ“खा एकैचोटी त्यही कोठामा रहेको पूर्णकदको शरिर देखिने आङ्खनो डे«सिङ्ग टेबुलमा प¥यो ।
ड्रेसिङ्ग टेबुलमा आफ्नो सुन्दर अनुहार देख्दा शिलुलाई आफैलाई लोभ लागे जस्तो भयो । हुन पनि शिलु आफैमा एक सुन्दर नारी हुन् । चट्ट मिलेको, बान्की परेको जिउडाल, टम्म मिलेका दा“त, गोरो र चम्कीलो रक्तवर्णको अनुहार । बिवाह गरेको पा“च बर्ष भए पनि उनको सौन्दर्य बढ्दो थियो ।
घट्दो थिएन । सुन्दर लोभलाग्दो र बान्की परेको शरीरलाई शिलुले ड्रेसिङ्ग टेवुलको शिशामा शीर देखि पाउसम्म राम्ररी नियालेर हेरिराखिन् । उता छोरी चल्दा चल्दै थाकेर पलङ्गमा मस्त संग निदाइन हेर्दाहेर्दै उनले आफ्नी बहिनी बिनुलाई सम्झन पुगिन् । बहिनी बिनु, उनी पनि उस्तै सुन्दरी थिइन् ।
शिलुभन्दा उनको सौन्र्दयमा कुनै कुरामा कमी थिएन । दिदी वहिनी दुईवर्षका मात्र फरक हुन् । सानै देखि स“गै खेल्दै आएका । उनीहरु दिदी वहिनी मात्र नभएर साथीजस्ता पनि थिए । सुख दुखका साथी र साक्ष्ँी थिए । शिलु अरु सवै कुरामा परिपक्व र अनुभवी थिइन् । तर, आवश्यकता भन्दा बढी शंकालु, उनको यही एउटा बानी खराब थियो ।
शिलुको अगाडि कसैले बिनुको सुन्दरताको प्रशंसा ग¥योभने उनलाई बिनुप्रति माया र इष्र्या दुवै लाग्दथ्यो । बहिनी भएकोमा माया गर्थिन् भने बिनु सुन्दर भएकोमा इष्र्या पनि गर्थिन् ।
खास गरेर शिलुलाई बिनु आफ्नो भिनाजुसंग धेरै बोलेको, जिस्किएको र भिनाजुको वढी ख्याल राखेको उनलाई मन पर्दैनथ्यो ।
शिलु, विनोद र बिनु संगै हिडिरहेको बेला एक दिन बिनुले बिनोदको जुत्ताको तना फुस्किएको देखिन् र, “भिनाजु तपाईको जुत्ताको तना (लेस) फुित्कएको छ” भनिन् ।
त्यो कुरा शिलुलाई थाहा नभएर बिनुले भनेकोमा शिलुलाई आफ्नो बहिनीप्रति इष्र्या जाग्यो । मनमनै सोच्न थालिन्, “कति ख्याल गरेकी हो ? किन यति धेरै ख्याल गर्छेस् ।” यस कुराले यस्तै यस्तै मनमा शंका उब्जाएर आफैले आफुलाई जलाउंथिन् । विनोदले जुत्ताको तना (लेस) लगाएर केहि अगाडी वढेका थिए । बिनुको नजर भिनाजुको कमिजमा प¥यो जहा“ बीचको टा“क लगाइएको थिएन ।
अनि बिनुले फेरि भनिन्, “भिनाजु तपाईको कमिजको टाँक फुस्कीएको छ, लगाउनुहोस ।” अनि के चाहियो शिलुलाई ? उनको मनले शंकै शंका गर्दा विनोदको कुराको ख्याल नभएको विर्सिन्छिन् । अनि फेरि बिनुप्रति शंका गर्न थालिन् । “होइन यसको दिमाग अन्त जान्न कि क्या हो ? खालि भिनाजुको मात्रै ख्याल गर्छे ।” भन्दै मन मन सोचिन । वास्तवमा यहा“ बिनुले भिनाजुको ख्याल गरेको भन्दा पनि शिलुको मनभित्रको शङ्काकालु स्वभावले गर्दा उनले ख्याल गर्नुपर्ने ठाउ“मा नजर पुगेन । र त, त्यहा“ बिनुको नजर पुग्यो ।
अनिफेरि सालीले भिनाजुको ख्याल गर्नु नराम्रो कुरा पनि होइन । दिदीको श्रीमानसंग सालीको हेराइ अलि फरक हुनु स्वभाविक पनि हो । विनोद एउटा सुन्दर र आन्मनिर्भर केटो हो । सालीले आफ्नो भावी श्रीमानको कल्पना गर्दा भिनाजु जस्तै सुन्दर र हेण्डसम होस् अथवा त्योभन्दा पनि राम्रो होस् भनेर कल्पना गर्थिन् । स्वभाविकै हो, ब्यवहार पनि अरु संगभन्दा निकट रुपमा गर्नु पनि स्वभाविकै हो ।
तर, शिलुले बिनुको हरेक नजर र क्रियाकलापलाई शंकाको दृष्टिले हेर्थिन् । अनि आफै मैले बेकारमा नचाहिने कुरा सोच्छु भन्ने लाग्छ । “बिचरा मेरी बहिनी त्यस्ती कहा“ छ र ? मलाई कति माया गर्छे । म पनि उसलाई कतिमाया गर्छु । मलाई नराम्रो हुनेगरि त त्यसले सोच्न पनि सक्दिन” भन्दै आफैले आफैलाई संझाउथिन् । तर, फेरि उत्तीखेरै पाइला पाइलामा शङ्का गर्न शुरु गर्थिन् ।
बिनुले विवाह हुनुपूर्व भिनाजुलाई सुनवलको आसपासका धार्मिक क्ष्ँेत्र पाल्ही भगवती, परासी, देवदहको पाकरी वृक्ष्ँ आदि सवै ठाउ“मा घुमाउन लगेकी थिइन् । साथमा दिदी शिलु पनि थिइन् । शिलुले सम्झ““दै जाने क्रममा सुनवलको चिनीमील घुम्न जा“दाको याद पनि गरिन् ।
त्यतिखेर उनी दुई जिउकी थिइन् । चिनिमील हेर्न जा“दा बिनु र विनोद कहिले अगाडि त कहिले पछाडी हुन्थ्ये । किनकि शिलु छिटो हिड्न सक्ने अवस्था की थिइनन् । झन् यस्तो अवस्थामा बिनु र विनोद बढी हेलमेल र निकट भएको उनलाई पटकै मन परेको थिएन । त्यो फेरी उनको मनको शङ्का मात्र थियो ।
मीलमा घुम्ने क्रममा बिनु र विनोद रुखको छहारीमा बसीराखेको थिए । शिलुले एक्कासी आफ्नो अगाडि तिनीहरुलाई देखिन् । विनोद र बिनुलाई देख्नासाथ उनी झसङ्ग भइन् ।
उनी झसङ्ग भएको विनोदले थाहा पाए तर बिनुले थाहा पाइनन् । विनोदले शिलुको अवस्था र झसङ्ग भएको देख्दा शिलुप्रति अलि बढी दृष्टी राख्न थाले । र, उनले शिलुलाई झसङ्ग हुनको कारण सोधे । सबैले सबैलाई त वताउ“दैनन् तर आङ्खनो श्रीमानले स्नेहपूर्वक सोधेका कुरालाई लुकाउन सकिनन् । उनले लाज पनि मानिनन् । अनि विस्तारमा भन्न थालिन्, “केही होइन, पेटमा बच्चा चलेको थियो ठीक त्यही बेला तिमीलाई एकैचाटी देखे“ ।
तिमीले देख्यौ कि वा थाहा पायौं कि जस्तो लागेर झसङ्ग भएकी हु“ । अरु केही होइन ।” विनोदले खित्का छोडेर हा“स्दै, “तिम्रो पेटभित्र बच्चा चलेको मलाई कसरी थाहा हुन्छ र ? त्यो तिम्रो सोचाइ मात्र हो” भने ।
शिलुले पनि जवाफ दिइन्, “आईमाईको कुरा तिमीलाई के थाहा ? आफूलााई यहा“ बच्चाले पेट बाहिर खुट्टा फाल्यो कि जस्तो भएथ्यो । त्यही भएर त झस्केको हो नि † हुन त अरुले थाहा त पाउदैन तर सबैले थाहा पाए कि जस्तो हुन्छ ।” यति भन्दै तीनजना दिदी भिनाजु र साली क्यान्टीनमा नास्ता गरेर बिनुको घरतर्फ लागे । शिलुले श्रीमानलाई अघि पछि तपाइ भने पनि मायाले भन्दा तिमी भन्थिन् ।
त्यसपछि पनि विनोद शिलु र बिनु बुटवलको हिलपार्क, विभिन्न पीठ, सिद्धबाबा मन्दिर, बुटवल फूलबारी आदि ठाउ“मा विभिन्न समयमा घुम्न जाने क्रम चलिरहयो । शिलुको विवाह भएको दुई वर्ष पछि बिनुको पनि मणिग्राममा विवाह भयो । कान्छी छोरीको बिवाहमा वावु आमा दाजु भाइले धुमधाामकासाथ गरी दिए । बिनुको श्रीमान नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको जागिरे थिए । दिनहरु वित्दै गए तर शिलुको मनको शंका घट्ने ठाउ“मा बढ्दै गएको थियो ।
एक दिन विनोद र शिलु बुटवल नया“गाउ ढवाहको पीसपार्क र मिलनपार्क घुम्न गएका थिए । ठीक त्यसैबेला बिनुकोे फोन आयो । विनादको मोबाइलमा विनोदले आफू नबोलेर सिधै शिलुलाई फोन दिए । बिनुले नमस्कार भिनाजु भन्दै एकोहोरो बोली राखिन् । “दिदी कता हुनुहुन्छ फोन पनि उठ्दैन दिदीको फोन नउठेर तपाइलाई फोन गरेकी हु“ ।” भनिन् ।
शिलु चुपचाप सुनीरहिन् । अनि, बिनुले, “हेलो भिनाजु किन नबोलेको” भनिन् । अनि बल्ल शिलु बोल्न थालिन् । “गर्छेस् मलाई फोन, मेरो फोन यही मसंग त छ नि †” भनिन् ।
यतिबेर दिदीले नबोलेको कुरामा बिनुलाई पनि दिदीले आफुप्रति केही रिजर्वेसन राखेर वोलेको अनुभव गरीन् । तर, शंका गरिनन् । दिदी वहिनीको कुरा भयो । बिनुले खुशखबर दिदीलाई सुनाउ“दै, “ए ल ठिक छ, यस्तो बेलामा आफ्नो ख्याल राख्नु, खुसी लाग्यो” भन्दै दिदी बहिनीको कुरा सकेर शिलुले विनोदलाई फोन दिइन् । “के छ ? खास कुरा जस्तो छ नि † के हो ?” विनोदले शिलुलाई सोध्यो ।
शिलुले पनि, “खास कुरै रहेछ” भन्दै विनोदलाई सबै कुरा वताइन् । यता शिलुको फेरि आफ्नो पिरलो शुरु भयो । हामी संगै छौं । “त्यो बिनुले मलाई फोन नगरेर आफ्नो भिनाजुलाई किन गरी ? मलाई ठिक्क पार्न फोन गरेको उठेन भनेर भनी । त्यसले फोन गरेको भए मलाई थाहा हुन्न । त्यसले भनेर हुन्छ ?”भन्दै भित्र भित्र मुरमुरियकी थिइन् । अरु कुरामा सकारात्मक सोच राख्ने शिलु विनोद र विनुको कुरा आउदा नकारात्मक सोच गर्दै अनुसन्धान गरी आफु गलत भएको आभास भएपछि मात्र सकारात्मक साेिच्थन् ।
फोनको सन्दर्भमा पनि नकारात्मक सोचबाट सकारात्मक आउने क्रममा शिलुले सोच्न थालिन् । आखिर उसले मलाई फोन गरेको भए त मिसकल हुनुपर्छ भनेर मोवाइल खोलिन् । हेर्दा त दश वटा मिसकल छन् । शिलुको आखिर के भएर हो मोबाइल साईलेन्समा हुन गएको रहेछ । बल्ल शिलुलाई केही राहत भयो ।
अनि जब आफू आङ्खनो सोचाइ गलत भएको महसुस हुन्छ, त्यो बेला शिलुले आङ्खनी बहिनी बिनुलाई सारै माया गर्थिन् । “विचरा बिनु, आखिर म दिदी हु“, उसले मलाई नराम्रो हुने काम त किन गर्थी र ? मेरो सोच नै त्यस्तै हो ।” भन्दै प्रायश्चित गर्थिन् ।
तर पनि फेरी शिलुले पाइला पाइलामा शंका पनि ब्यक्ति गर्थिन् । एक दिन शिलु, विनोद र बिनु सवै सुनवल ससुराली गएका थिए । त्यहा“ वुटवलबाट अरु कोही पाहुना पनि आएका थिए । विनोदका नजिकका थिए पाहुना । तिनीहरुले विनोदलाई माया गरेर बिनु भन्ने गर्दथे । त्यसपछि बिनु भन्दै उनिहरुले विनोदलाई बोलाए । बिनु पनि त्यही थिइन् । शिलु पनि संगै थिइन् । उनीहरुले बोलाएको ठाउ“मा विनोद र बिनु संगसंगै पुगे । त्यहा“ विनोदलाई वोलाइएको थियो तर बिनु भनेपछि बिनु पनि गइन् । कसैले विनोदलाई माया गरेर बिनु भन्दा पनि शिलुलाई राम्रो लाग्दैनथ्यो । विनोद र आङ्खनी वहिनीको माया गरेर बोलाउने नाम एउटै भएको पनि शिलुलाई मन पर्दैनथ्यो । तर। के गर्ने ? कसलाई भन्ने ? न श्रीमानलाई भन्न सक्थिन् न बिनुलाई नै । शिलुलाई आफूलाई शंका लागेको कुराले भन्दा पनि त्यो शंका ब्यक्त गर्ने ठाउ“ नह“ुदा उनलाई झन् उकुसमुकुस हुन्थ्यो । श्रीमानप्रति उनले भन्ने कुरा भेटाएकी नै थिईनन् । बहिनीलाई माया र शंका दुवै लागेपनि माया ब्यक्त गर्दथिन् । तर, शंका ब्यक्त गर्न सक्दिनथिन् । गर्ने ठाउ“ र आधार पनि थिएन । उनि प्रत्येक शंकाको अनुसन्धान गर्दा आफू असफल भएकी थिइन् । विचरा बिनुलाई दिदीको माया मात्रै महसुस गरेकी थिइन् । शंकाको त शंका पनि थिएन उनमा ।
एकदिन बिनु शिलुको घरमा आउने योजना बनाइन् । शिलुले पनि बहिनीको फरक अवस्था भएको हु“दा, “अलि सजिलो साधनमा यतै बस्ने गरी आउन” भनिन् । बुटवल र मणीग्राम नजिक भएपनि बिनु बस्ने गरी दिदीको घरमा गइन् । स्नेह पूर्वक बहिनीलाई अ“गालो मारेर घर भित्र लगिन् ।
शिलुले दुःख सुखका कुरा गर्दै दिदी बहिनीका लामो कुराकानी पछि शिलु भान्सा तर्फ लागिन् । विनोद पनि घरमा आइपुगे । साली भिनाजुको पनि सञ्चो विसञ्चो दुःख सुखका कुराहरु चले । विनोद आएको शिलुलाई पनि थाहा भयो । शिलुले नास्ता तयार गरेर बैठक कोठामा पस्दा विनोद र बिनु संगै थिए । बिनु भर्खर के मात्र उठेकी थिइन् दिदीलाई देख्ने वित्तिकै उनी झसङ्ग भइन् । वास्तवमा उनी शिलुलाई देखेर होइन कि भिनाजुलाई सम्झेर झसङ्ग भएकी थिइन् ।
ठीक त्यही वेला उनको नजर शिलुतर्फ प¥यो । शिलुलाई के चाहियो र अब ? उनको मनमा शङ्काका डल्ला दगुर्न थाले । साली भिनाजु संगै छन् “मलाइ देखर त्यो किन झसङ्ग भइ ?” बिनुमाथि शङ्काको वर्षा वर्षाउन थालिन् । तर, भन्न सक्दिनथिइन् ।
आज शिलुले जसरी पनि भन्छु भन्ने संकल्प गरिन् । नास्ता खाएर सकिएपछि बिनुलाई आङ्खनो कोठामा वोलाइन् अनि अलि नजानिदो रुखो स्वरमा भनिन्, “भिनाजु र त“ त्यहा“ संगै भएको वेला मलाई देखेर किन झस्किस् ?” के हो भन्ने वित्तिकै बिनुले दिदीको गलत आशयलाई सहन नसकेर वरवर आ“सु खसालेर रुन थालिन् । बहिनी रोएको शिलुलाई पनि राम्रो लागेको थिएन ।
उनले सम्झाउ“दै, “त“लाइ किन झस्किस् पो भनेको त † किन रुन्छेस् चुप लाग । किन झस्किस्” भनिन् । बिनुले पनि सवै कुरा खुलस्त वताइन् ।
बिनु झस्किनु पर्ने कारण खास अरु केही थिएन । जुन कारणले शिलु सुनवल चिनी मीलमा विनोदलाई देखेर झस्किसकेकी थिइन् । बिनु झस्किने कारण पनि त्यही रहेछ । आखिर शिलु आफुपनि नारी भएकी र त्यस्तो अवस्थाबाट आफुपनि गुज्रेकीहु“दा स्थितिलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर बहिनीलाई मातृत्व हृदयले दिने जस्तो परिपक्व माया प्रदर्शन गरेर बहिनीलाई खुसी वनाइन् ।
भोलिपल्ट बिहानै बिनु आफ्नो घर गइन् । समयको अन्तराल संगै बिनुलाई छोरो जन्मेको पनि एक वर्ष भैसकेको थियो । बिनुका श्रीमान सरकारी खर्चमा दुई वर्षे अध्यायनको लागि फिलिपिन्स जा“दै थिए । साथमा बिनु र छोरा समेत फिलिपिन्स जाने तयारीमा थिए । जाने बेलामा दिदी भिनाजुलाई बिनुले मणीग्राम बोलाइन् । त्यहा“ पनि उनले स्थानीय धार्मिकस्थल, मठ मन्दिर, वनवाटिका र लुिम्बनी सबै ठाउ“मा डुलाइन् । दुवै परिवार धुमघाम गरे अब दुई वर्ष भेट हु“दैन भन्दै दिदी वहिनी छुट्टिन चाहेका थिएनन् ।
त्यसैले बिनु फिलिपिन्सको लागि काठमाण्डौं जाने दिन भन्दा एक दिन अगाडि, दिदीको घर बुटवल हु“दैं सुनवल माइत बसेर भोलिपल्ट भैरहवा विमानबाट काठमाण्डौं जाने योजना बनाइन् । विदेशजाने वेलामा मणिग्रामबाट ट्याक्सी रिजार्व गरेर बुटवल आइन् । त्यो कुरा शिलुलाई पनि थाहा थियो । बिनु आउछिन् भनेर विनोदलाई छिटो घर आउन भनेकी थिइन् । नभन्दै विनोद घर अगाडि आइपुग्दा बिनु पनि छोरालाई काखमा च्या“पेर ट्याक्सीबाट निस्किन् ।
विनोदले पहिला घरको घण्टी बजाए, यता शिलु ड्रेसिङ्ग टेबलमा आफूलाई हेरेर के के सोच्दै थिइन् । घण्टीको आवाजले उनको यहा“सम्मको सोचाइ भङ्ग गरिदियो । उनले कोठाको चुकुल खोलेर तलको ढोका खोलिन् । विनोदले बिनुको छोरा काखमा लिएको थियो । बिनु संगै थिइन् । सबै माथी गएर कोठाभित्र पस्ने वित्तिकै दिदी बहिनीको कुराले छोरी सानी पनि ब्यूझिइ । दिदी बहिनीका छोरा छोरी दिदी भाइ भएर खेल्न थाले ।
बिनु आजै माइत जाने कुरा सवैलाई थाहा थियो । त्यसैले बिनुको मनमा एउटा घोको थियो, बुटवल नयागाउ“ मुक्तिनाथधामको दर्शन गर्ने । उक्त कुरा उनले अ दिदीलाई सुनाइन् । मुक्तिनाथधाम जाने तयारी पनि भयो । बुटवलबाट मुक्तिनाथधाम तर्फ शिलु, विनोद, बिनु, सानी नानी र बिनुको छोरा गरी पा“च जना ट्याक्सीमा चढेर मुक्तिनाथधाम तर्फ लागे ।
शिलु आजै बिहान मुिक्तनाथधाम गएर आएकी भएपनि बहिनीको लागि फेरि जा“दै थिइन् । मन्दिरमा ठूलो भीड थियो । पहिले विनोद १०८ धारा स्नान गरी छोरा छोरीलाई लिएर बसे पछि शिलु र बिनुले पनि १०८ धारामा स्नान गरे । गणेश र हनुमानको मन्दिरमा दर्शन गरी मुक्तिनाथको मुख्य मन्दिरमा पूजा अर्चना गरे । त्यहा“बाट शिवलिङ्गमा जर्लापण गरी अखण्ड दीप दर्शन गरी मन्दिरका दुवै सभाकक्षमा भइरहेको दिव्य भजन सुन्दै र अवलोकन गर्दै त्रिनेत्र गौमाताको दर्शन गरे । अन्तमा हवन कुण्डमा गइ पूजा अर्चना गरे ।
बिनुले आफूले मुक्तिनाथमा गइ पूजाअर्चना गरी केही गर्छु भनेर सोच गरेकी रहेछिन् । त्यो सोच पूरा भएर आफू मुक्तिनाथधाम आएको प्रसंग कोटायाइन् । सोमबारी पूजा गरी सौ कार्य सकिए पछि ठीक गेटबाट बाहिर मात्र निस्केका थिए, मन्दिर भित्रको शङ्घ घण्ट भजन कीर्तनको ध्वनिले वातावरण पूरै गुन्जायमान भएको थियो । ठूलो घण्टको आवाज शिलुको कानमा प¥यो ।
उता भजन कीर्तनको सुमधुर आवाजले शिलुको मष्तिकमा भएका सबै नकारात्मक सोचलाई पूरै सकारात्मक सोचमा परिवर्तन गरिदियो । आङ्खनी मुटुभन्दा नि प्यारी बहिनीप्रतिको उसको शङ्का सदाको लागि छुटेको पूर्ण महसुस शिलुलाई भएछ । उनी एक्कासी बहिनी बिनुलाई अंगालोमा कसेर मुटु नै जोडिएझै“ गरी रुन थालिन् ।
बिनुलाई विछोडको वेला दिदीलाई गाह्रो भएहोला भनी सोचिन् । अब दुई वर्ष भेट हु“दैन भनी संझेर बिनु पनि दिदीको अगालोमा हराएर रुन थालिन् । शिलुको मनमा दुईवटा कुरा थियो, एउटा बहिनी संगको विछोड र अर्को बहिनीप्रति आफूले अनाहकमा गरेको शङ्काको प्रायश्चित । दुई वर्षको बहिनीसंगको विछोड त निश्चित थियो तर शिलुको लागि अर्को तर्फ बहिनी प्रतिको शङ्का सदाको लागि छुटेकोमा प्रायश्चित र खुसी दुवै थियो ।
यसरी नया“ सोचका साथ मुक्तिनाथधाम प्रति आभार ब्यक्त गर्दै उनीहरु त्यहा“बाट वुटवल तर्फ प्रस्थान गरे । शिलुले धेरै बेरसम्म चुन्नीको सप्काले आ“शु पुछ्दै थिइन्, सायद बहिनी प्रतिका शङ्काका आँशु निख्रदै थिए ।
नेपाल तरुण दलद्वारा विष्णु पौडेललाई क्षतिपूर्ति दिन एक रुपैंया संकलन
पुष्पाकाे मृत्युले सिद्धार्थ गौतमबुद्ध क्याम्पसमा बैसाख २० गते शाेकबिदा,१२ काे परिक्षा भने चल्ने
‘मुख्यमन्त्री पाेखरेलमाथि लक्षित गर्दै बम प्रहार भएकाे छैन’ : सल्लाहकार केसी